Helikopta uye ndege zvinowirirana mirair muArizona kuuraya vanhu vaviri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Helikopta uye ndege zvinowirirana mirair muArizona kuuraya vanhu vaviri
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kubonderana kwepakati kwakaitika neChishanu mangwanani padhuze neChandler Municipal Airport, iri mumusha weguta reArizona rePoenix.
Midair kudhumhana pakati peherikoputa uye yakamisikidzwa bapiro ndege yakaitika pedyo neMcQueen neQueen Creek muArizona.
Ndege yakakwanisa kumhara zvakachengeteka asi iyo helikopta yakarovera ikabatira moto, ichiuraya vanhu vaviri vaive muchikepe.
Tsaona inosiririsa yakauya mwedzi mitatu mushure meimwe tsaona diki yendege kuChandler Municipal Airport.
Helikopta uye ndege diki zvakapesana nendege padhuze neChandler Municipal Airport mu Arizona.
Chopper yakadonhedzwa padyo neChandler Municipal Airport kuArizona
Ndege yakwanisa kumhara zvakachengeteka, asi iyo helikopta yakarovera ndokutsva nemoto.
Vaviri vaive muherikoputa vakaurayiwa, nepo vafambi vendege vachienda vasina kukuvara.
Kubonderana kwepakati kwakaitika neChishanu mangwanani padhuze neChandler Municipal Airport, iri mumusha we Arizonaguta guru reguta re Phoenix.
Chandler Fire Battalion Chief Keith Welch akasimbisa kuti vanhu vaviri vaive muherikoputa vakaurayiwa, nepo vafambi vendege, ndege inofambiswa nemhepo, vaisada kurapwa.
Hapana munhu pasi akakuvadzwa.
Mamiriro ezvinhu okuputsika aya haanyatso kujeka, uye mapurisa eChandler aburitsa kufona kwezvapupu uye vhidhiyo vhidhiyo yechiitiko ichi.
Mifananidzo yakagovaniswa nevatori venhau munguva pfupi yapfuura inoratidza ndege yakamira padhuze nemugwagwa, sezviri pachena izere.
Akaparadzaniswa mavhidhiyo anoratidza zvisaririra zveherikoputa pane inoita kunge chigamba chemarara, chakaputirwa netaraini nevashandi vechimbichimbi.
Tsaona inosiririsa iyi yakauya mwedzi mitatu mushure metsaona diki yendege paChandler Municipal Airport. Kudzoka muna Chikunguru, imwe-injini Beechcraft Bonanza B36 ine vanhu vana vari muchikepe yakadonha ndokubatira moto nguva pfupi vachangosimuka, vachitumira munhu mumwe kuchipatara nekukuvadza vamwe vatatu.